GOOL FM OO GOOB JOOG AHAYD: Maxaan kusoo aragnay kulankii Arsenal vs Man City + Sawirro – Gool FM
GOOL FM OO GOOB JOOG AHAYD: Maxaan kusoo aragnay kulankii Arsenal vs Man City + Sawirro
Raage August 7, 2016
(Gothenburg) 08 Agoosto 2016 – Waxaa galabta gegada caalamiga ah ee Ullevi Nora ee magaaladan Gothenburg ka dhacay kulan adag oo sxbtinimo oo dhexmaray kooxaha Arsenal vs Man City oo ka wada dhisan dalka Ingiriiska.
Ciyaartaas oo ay Man City ku hormartay gool uu u ansixiyey Kun Aguero waxaa markii dambe ku heestey kooxda Arsenal oo 3 is xigey ugu bedeshey kuwaasoo ay kala dhaliyeen Alex Iwobi, Theo Walcott iyo Chuba Akpom kahor inta aanu Man City markale soo noolaynin Kelechi Iheanacho kulankuse wuxuu ku idlaaday 3-2 ay Gunners ku guulaysatey.
Waxay ahayd ciyaar ay dadwaynuhu aad u danaynayeen guud ahaan gaar ahaan asxaabta kala taageerta labadan naadi ee waawayn kuwaasoo ay ku jireen Soomaali fara badan oo garoonka ku sugnayd.
”Dareen ahaan bay ciyaartani micne wayn iigu samaynaysaa waayo waa ciyaartii iigu horreeysey ee aan abid toos u daawado anigoo goob joog ah, lkn dhanka farsamada waxaa fiican oo tafaasiil badan inaad shaashad ka daawanayso” ayuu yiri Sakariye oo ah taageere Soomaaliyeed oo Gooner ah oo aannu si toos ah garoonka ugu waraysannay intii aannu garoonka joogney oo aan sidoo kale waraysannay kuwo Swedish ah.
Cali Qaran oo ah taageere Soomaaliyeed oo u sacbinayey kooxda Man City ayaa sheegay inuu garoomo kale ciyaaro ku soo daawaday, balse ay ciyaartani xiise gaar ah u lahayd maaddaama ay la ciyaarayeen koox ay ku xafiiltamaan EPL.
Larsson oo u dhashay dalka Sweden isla markaana aad ugu faraxsanaa bandhigga iyo natiijada kooxda uu taageero ee Gunners oo aan isagana waraysannay ayaa saadiyey inuu horyaalka Ingiriisku sanadkan ka xoogganaan doono intii uu ahaan jirey.
”Kooxo sanadihii dambe jilicsanaa ayaa fasal-ciyaareedkan is xoojiyey” ayuu yiri.
Kulankan waxyaabihii ay Gool FM kusoo aragtay waa sida ay taageerayaashu u danaynayeen inay kulankan shaahidaan, iyagoo aan xitaa ku yalmin tiiyoo uu roob badani da’ayey.
Wax kastase wanaag kuma dhamaanin oo waxaan sidoo kale goob joog u ahayn dhaawicii ka ilmaysiiyey daafaca dhexe ee Gabriel Paulista oo sidoo kale madax xanuun ku noqday macallinka iyo mucaashiqiinta Gunners, waayo waxay haatan ka dhigan tahay in Arsenal aanu u fayoobayn laacib dambeed ah oo la isku hallayn karo, maxaa wacay Per Mertesacker dhaawac jilib ah ayuu ku maqnaan karaa muddo 4 bilood ah, halka Laurent Koscielny oo kusoo daaley Koobkii Qaramada Yurub uu haatan uun tababarka kusoo laabtay.
Waxaan garoonka ku aragnay calanka dalkeenna Somalia oo ay garoonka geeyeen dhallinyaro Soomaaliyeed oo xitaa noo sheegay inay garoonkaba u yimaaddeen si ay calankeenna buluugga ah uga muujiyaan fagaarayaasha caalamka.
Waxaa garoonka ku sugnaa dhallinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo ay xitaa qaarkood oo aannu waraysannay noo sheegeen inay ciyaartan uga yimaaddeen dalal kale oo Yurub ah sida Norway, Ingiriiska iyo dalal kale.
Guddiga qaban qaabada oo aan la sheekaysannay waxay noo sheegeen in kulankan Super Matchen oo xagaa kasta lagu casuumo kooxo waawayn oo qaaradda Yurub ah uu haatan noqday mid najaxay oo caalamka oo dhan lagala socdo, taasoo iidheh iyo suuq gayna u ah magaaladan Gothenburg oo ah xarunta web-ka GoolFM.net, iyadoo Gool FM ay mustaqbalka dhow galaangal hoose u yeelan doonto ciyaaraha waawayn ee caalamka lagu qabto haddii Alle idmo.
Waa dabcan markii 2-aad oo ay Gool FM toos ugasoo warranto ciyaar caalami ah oo ay goob joog u tahay waxaana tan nooga horreeysey 2013 oo aannu u joogney kulankii Real Madrid vs PSG oo uu kasoo warramayey isla Maxamed Xaaji oo ah tifaftiraha GoolFM.net.
Cristiano Ronaldo oo waqtigii la filayay ka hor dib ugu soo laabtay Real Madrid laakiin...
KA BOGO: Sanadihii ay kooxda Man United ku kala guuleysatay koobka Community Shield